Golaha Wasiirrada Oo Ansixiyay Ku Noqoshada Miisaaniyadda 2020 oo 35% La Kordhiyay – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Ra’iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa guddoomiyay shirka Golaha wasiirrada oo maanta si aqlabiyad leh loogu ansixiyay ku noqoshada miisaaniyadda sanadka 2020 oo la kordhiyay
Kororkan kharashaadka ayaa loo adeegsanayaa la taacaaliidaa safmarka Covid19, Doorashooyinka, daadadka iyo xaaladaha bini’aadamnimo ee dalka la soo dersay.
Dakhliga guud ee dowladda ayaa hoos u dhacay sababo la xiriira xaaladaha COVID19 iyada oo la qiyaasay in ku dhowaad $67 Milyan oo la odorosayay inay dakhilaga gudaha ka soo xerooto ay meesha ka baxayso, balse maadaama dalka deynta laga cafiyay waxa uu helayaa kaalmo toos ah, taas oo buuxineysa hoos u dhaca dakhliga gudaha.
Kabka miisaaniyaddan oo ah dhamaan dalka oo idil ayaa laga helayaa Bankiga Adduunka. taas oo ka dhalatay go’aankii deyn cafinta (Decision Point) Soomaaliya oo ku soo beegmay xilli ay Soomaaliya aad ugu baahnayad.
Previous Dfs Soomaliya oo lagu eedeyay in aysan ka Tacsiyadeen 8 Ruux oo ciidanka Dowladdu dileen
Next Maamulka degmada Badhan ee gobolka Sanaag ayaa dayactir ku sameeyay ceelka biyaha ee degmadaas